Mawduucyada - Creativos Online | Abuurista khadka tooska ah
Template waa erey Ingiriisi ah oo loo isticmaalo in lagu qeexo shaxanka, taasi waa, muuqaalka uu bog, codsi ama adeegsi kasta oo kale yeelan doono kaas oo lagu kala sarrayn karo muuqaalkiisa iyo waxa ku jira. Waqtigan xaadirka ah waad awoodaa soo dejiso malaayiin arrimo ah In kasta oo ay sidoo kale jirto suurtagalnimada abuurista mid caado ah haddii aan haysanno barnaamijyada lagama maarmaanka ah iyo aqoonta naqshadeynta ujeedkan.
by Maryan Rose samee Toddobaadyada 4 .
Power Point waa barnaamij soo bandhigid garaaf ah, kaas oo ka kooban qaybo macluumaad si la mid ah buuga ...
by Nerea Morcillo samee Toddobaadyada 4 .
Imaatinka ganacsiga e-commerce, isticmaaleyaal badan ayaa u baahday inay cusboonaysiiyaan dhinaca ganacsigooda tan ...
by Nerea Morcillo samee Bilaha 2 .
Qaybihii hore, waxaan kaala hadalnay InDesign. Ma aha oo kaliya waa barnaamij ay qalabyo kala duwan ay ku badan yihiin ...
by Lola curiel samee Bilaha 9 .
Waxaan la laabaneynaa taxaneyaal bilaash ah oo ujeedooyin ah dibloomaasiyada sida caadiga ah la bixiyo dhamaadka ...
Waxaan ku jirnaa sannadkan 2020 waxaanan xooga saaraynaa wax wanaagsan: waxaan gacanta ku haynaa boqolaal kheyraad oo loogu talagalay arrimo ...
Maanta waxaan haynaa ilo aan xad lahayn oo halka dhowr sano ka hor ay ka sii adkeyd in loo wajaho arrimo ...
Haddii aad diyaarinaysid nashqadda taraafikada, qaab-dhismeedkan ayaa hubaal ku imaan doona si uu kuu hago. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad uga fogaato khaladaadka markaad daabacayso iyo wixii ka sarreeya oo dhan si aad uga fogaato cabsida iyo sixitaanka daqiiqadda ugu dambeysa maxaa yeelay qoraal ama sawir aadan fileynin ayaa go'an.
by Judith Murcia samee 3 sano .
Mid ka mid ah caadooyinka ugu quruxda badan ee Kirismaska, iyo inaan luminayno waqtiga ka dib ayaa ah ...
Waxaan haynaa dalab kale oo gaar ah oo ah 250 sheybaar iyo jees jees kaararka ganacsiga, xaashiyaha iyo waxyaabo badan oo intaas la ...
by Melissa Perrotta samee 4 sano .
Naqshadeynta naqshadeynta waa qeyb ka mid ah xirfadaha oo gacan ka geysta sameynta wax kasta oo ugu ekaanaya sida ugu fiican. By…
Ereyga naqshadeynta garaafka, waxaa jira dhowr waji oo la xiriira welwelka ganacsiga ee ururada. Haddaan hadlayno ...